❤️ Instagram သည် ကျွန်ုပ်အား အကောင့်ဝင်ခွင့်မပြုပါ။ : ပြုပြင်လမ်းညွှန် - Winches ကလပ်
Instagram သည်အားကောင်းသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်, ဖန်တီးမှုဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ရန်နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဘာလုပ်နေသည်ကိုကြည့်ရန်နေ့စဉ်လူသန်းပေါင်းများစွာကသုံးသည် သြဇာရှိသောလူများ. များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏နောက်လိုက်များနှင့်အကြောင်းအရာများဝေမျှရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားရန် site ကိုအသုံးပြုသည်။.
မင်းရဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့တာကတော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ် Instagram အကောင့်, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကလူအတော်များများဟာဒီအခြေအနေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့ရတယ်. ဤဖြစ်စဉ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှင်းပြချက်များစွာရှိသည်.
လွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိသည်, စွန့် ဦး တီထွင်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Instagram ကိုစီးပွားရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်သုံးသည်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုမသုံးနိုင်တဲ့အခါ, ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်, ဆိုရှယ်မီဒီယာရှိနေခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေ.
ကံကောင်းတယ်, များသောအားဖြင့်ပြဿနာအများစုအတွက်လွယ်ကူတဲ့ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုရှိတယ်. ဒီလမ်းညွှန်မှာ, သင့် Instagram အကောင့်သို့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။.
Instagram ချိတ်ဆက်မှု အမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်များ
သင်၏ချိတ်ဆက်မှုကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်ကြောင်း အသိပေးသည့် အမှားအယွင်း မက်ဆေ့ခ်ျကို လက်ခံရရှိပါက၊, သင်၏ပထမရွေးချယ်မှုမှာ သင့်စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။. အဲဒါက အလုပ်မဖြစ်ဘူး။, ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အကောင့်တွင် အခြားပြဿနာတစ်ခုရှိနေသည်။.
သင်၏ချိတ်ဆက်မှုကြိုးစားမှု မအောင်မြင်သောအခါ, သင်သည်မှားယွင်းသောမက်ဆေ့ဂျ်မျိုးစုံအနက်မှတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိဖွယ်ရှိသည်, တခါတရံမှာမင်းရဲ့ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်၊ တခါတလေမင်းရဲ့ email ကို. ဘယ်သူကမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့အမှားသတင်းကိုလက်ခံတာကိုမကြိုက်ဘူး, ဒါပေမယ့်အားသာချက်ကတော့ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကမင်းဘာ့ကြောင့်အဆက်အသွယ်မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုညွှန်ပြပေးတယ်.
ဒါတွေကတော့ Instagram ရဲ့အသုံးအများဆုံး login ချို့ယွင်းချက်အသိပေးချက်အချို့ပါ:
နာမည် Instagram အသုံးပြုသူကိုမတွေ့ပါ.
ကျွန်တော်တို မင်းရဲ့အကောင့်ကို log in လုပ်လို့မရဘူး.
ဆန့်ကျင်ဘက် password မေ့သွားတယ် “အသုံးပြုသူအမည်” ?
ဒီပြသနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုမလေ့လာခင်, ကွန်နက်ရှင်အမှားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကိုအရင်ကြည့်ရအောင်. Instagram အမှားမက်ဆေ့ခ်ျများသည်ပြဿနာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းနှင့်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ကိုသဲလွန်စကောင်းကောင်းပေးတတ်သည်။.
Connection Failure ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ
login မအောင်မြင်ရခြင်း၏အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းအရင်းမှာသင်စကားဝှက်မှားရိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, အလွန်မကြာခဏဖြစ်ပျက်သည်. ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောစာလုံးပေါင်းဖြစ်နိုင်သည်, entry error တစ်ခုကြောင့် (စာလုံးအကြီး (သို့) စာလုံးသေး), ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမှားတဲ့စကားဝှက်တောင်. သင်၏စကားဝှက်မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ, ၎င်းသည်စကားဝှက်ပြဿနာဖြစ်လျှင်, ပေးသော reset password link ကိုသုံးပါ အင်စတာဂရမ်.
စက်အသစ်သို့ပထမဆုံး login လုပ်ခြင်းဖြင့် Instagram ၏ login အမှားများသည်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်သည်. ပလက်ဖောင်းသည်သင်အသုံးပြုနေသောစက်ပစ္စည်းကိုမမှတ်မိသောအခါ, နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မချင်း၎င်းကိုသင်သုံးခွင့်မရပေ.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဆင်မပြေ။ မလိုအပ်ဟုထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါသည်, ဒါကအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးအဆင့်ပါ. တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် device ကိုသုံးပြီးလက်မှတ်ထိုးဝင်ပြီးမင်းရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုဟက်ဖို့ကြိုးစားရင်, ဒီအဆင့်ကသူ့ကိုရပ်တန့်စေနိုင်တယ်. အပိုဆောင်းအတည်ပြုချက်သည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အာမခံသည် သင့်အကောင့်၏လျှို့ဝှက်ချက် ထိန်းသိမ်းထားကြသည်.
အခြားကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများတွင် Instagram အက်ပလီကေးရှင်းကိုမထောက်ပံ့တော့သောစက်အဟောင်းကိုသုံးခြင်းတို့ပါဝင်သည်, စက်ပေါ်ရှိရက်စွဲနှင့်မှားယွင်းသောဆက်တင်များ.
ရံဖန်ရံခါ, သင့်ဖုန်းတွင်မှတ်ဉာဏ် (သို့) ဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာသည်အပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်. ဒေတာနှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုအပြစ်တင်ရပေမည်, တခုခုကမင်းရဲ့ device နဲ့ Instagram server ကြားဆက်သွယ်ရေးပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တယ်.
မအောင်မြင်သော login ၏နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းမှာသင်၏ Instagram အကောင့်ကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။. သင်ဤအရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်, မတော်တဆတောင်. တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းရဲ့အကောင့်ကိုဟက်ခံရတာဒါမှမဟုတ် Instagram ပလက်ဖောင်းကမင်းကိုခဏတဖြုတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ် သင်၏အကောင့်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်.
သင်၏ Instagram အကောင့်နှင့်မည်သို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုလမ်းညွှန်ပါ
ယခုအချိန်သည် Instagram login ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကြည့်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်. သင်အမှားသတင်းတစ်ခုလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်အကြောင်းအရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်အချို့ရှိသည်, အောက်ပါနည်းလမ်းများကိုသင်စမ်းနိုင်သည်.
၎င်းတို့အများစုသည်အမြန်ပြင်ဆင်ချက်များဖြစ်သည်, သို့သော်အချို့ကပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အဖြေရှာရန်အချိန်အနည်းငယ်နှင့်အားထုတ်မှုအနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်. သင်သည် Instagram ၀ ယ်သူ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ရန် (သို့) သင့်ကိုကူညီရန်ပြင်ပအက်ပ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။.
သင်တူညီသောစကားဝှက်ဖြင့်ထပ်မံ ၀ င်ရန်သင်ကြိုးစားခဲ့သည်, အနားယူခြင်းသည်သင်၏စကားဝှက်အကြောင်းတစ်ခုခုကိုမှတ်မိရန်ကူညီနိုင်သည်. မဟုတ်ရင်, Instagram တွင် reset password link ကို အသုံးပြုပါ။.
ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော အမြန်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် အပလီကေးရှင်းဆာဗာအကြား ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။. မကြာခဏ, ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကို အလွန်အကျွံသုံးသောအခါ, အပလီကေးရှင်းများ ချွတ်ယွင်းစပြုလာနိုင်သည်။, ဒါကြောင့် ဒီအဆင့်ကို အရင်စမ်းကြည့်ပါ။.
သင်၏ဖုန်းဒေတာ (သို့) Wi-Fi မဖွင့်ပါက, သင် ဝင်၍ မရပါ. မကြာခဏ, သင်သတိမပြုမိဘဲသင်၏ဆက်သွယ်မှုသည်ပျက်သွားသည်. အားနည်းသောသို့မဟုတ်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုသည်သင်၏ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။. ဆာဗာသို့ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားသတင်းတစ်ခုရလျှင်သင်၏ Wi-Fi router ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်.
သင်အချိန်မမှန်ခြင်းနှင့်ရက်စွဲဆက်တင်များမမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်စက်အသစ်တစ်လုံး (သို့) အခြားကိရိယာတစ်ခုတွင်ရှိနေနိုင်ပါသည်. သင်၏ပုံမှန် device တွင်ဤဆက်တင်များမှားယွင်းခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။. ဤအမှားများသည် Instagram သို့ ၀ င်ရောက်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေသည်. ဆက်တင်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါကအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအချိန်နှင့်ရက်စွဲသတ်မှတ်ချက်များကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်.
အပလီကေးရှင်း၏ cache နှင့် data များကိုရှင်းပါ
အမှားသည်လျှောက်လွှာမှလာလျှင်, cache ကိုမကြာခဏရှင်းလင်းခြင်းသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်. ထိုသို့ဆိုလျှင်, သင် device settings သို့သွားရန်လိုအပ်သည်. လျှောက်လွှာဆက်တင်များတွင်, သင်သည် Instagram ကို ရွေးချယ်၍ cache နှင့် data များကိုရှင်းလင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်. မင်းရဲ့အကောင့်ကိုမင်းသုံးနိုင်လားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့မင်းရဲ့ PC ဒါမှမဟုတ်အခြားစက်ကနေလက်မှတ်ထိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်။.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Instagram ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းနည်းများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလွယ်ဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။. ပြသနာအများစုကိုဒါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်. မင်းအကောင့်မဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်, သင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဖြေတစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပါသည်.
မှန်ကန်သောစကားဝှက်ကိုမမှတ်မိလျှင်သင်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။. မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တတ်တယ်.
သင်ကြိုးစားနိုင်သောအခြားအဖြေတစ်ခုမှာ app ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်. မင်း app ကခေတ်မမီတဲ့အခါ, ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်သင့်သလောက်မလုပ်ဆောင်တော့ဘဲနောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များမရှိပေ.
သင်၏ Facebook အကောင့်ဖြင့် Log in ၀ င်ပါ
မင်းရဲ့ Facebook account နဲ့ login ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်. ဤကြိုးစားမှုအားလုံးမအောင်မြင်လျှင်, မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းက Instagram ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကောင့်ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းဖို့သူတို့ကိုမေးပါ.
ယခင်ဆောင်းပါးတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကို Instagram မှာဟန့်တားခဲ့ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
နောက်ဆောင်းပါးInstagram တွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်မည်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် ?